भोलि जेठ २३ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
June 4, 2020 1575
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)- सु’रुमा रमाइलो यात्रा र मनोरञ्जनको आनन्द लिने स’मय छ। आतिथ्य खर्चिलो देखिए पनि सत्कार पाइनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। विभिन्न भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सकिनेछ। दिउँसोदेखि आफन्त’सँग सुमधुर सम्बन्धका लागि व्यवहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। स्वास्थ्यमा कमजोरी देखापर्न सक्छ। प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला।
वृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो)- रोकिएका काम बन्नाले मनग्य लाभ हुनेछ। द्वेष वा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ’। व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने नयाँ योजना शुभारम्भ हुनेछ। दिउँसोदेखि रमाइलो जमघटमा सहभा’गी भइनेछ। परिवेश उल्लासमय रहे पनि बाध्यताले निरीह बनाउन सक्छ। प्रतिष्ठा एवं लोकाचारका लागि फजुल खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह)- सुखद समाचारले उत्साह जगाउनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ। बुद्धिको उपयोगले ‘लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक अभिव्यक्तिको प्रभाव बढ्नेछ। दिउँसोदेखि नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। आम्दा’नीका स्रोत पनि बढ्नेछन्। प्रतिस्प’र्धामा विजयी भइनेछ। मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउन सक्छ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो)- हतारमा निर्णय लिँदा काम बिग्रन सक्छ। तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई समस्या पर्नेछ। बेसुरमा बोल्ने बानीले पनि दु:ख पाइनेछ। अरूलाई दिएको वचन पूरा गर्न नसकिए पनि शुभचिन्तकहरूले सा’थ दिनेछन्। दिउँसोदेखि बौद्धिक कलाको प्रभाव ब’ढ्नेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। पहिलेको दुविधाले निर्णायक मोड लिनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन्।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे)- प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। कर्मयोगले नयाँ मोड लिनेछ भने मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम आर्जन गर्न सकिनेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। गरिएका कर्मको उचि’त प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। दिउँसोदेखि साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ला। बेसुरमा काम गर्ने बानी_ले पनि मेहनत खेर जानेछ। पुरानो गतिले पनि काम बिग्रन सक्छ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो)- अवसर प्राप्त भए पनि आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ। शुभचिन्त’कहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्दा दु:ख पाइनेछ। वादविवाद वा खर्च हुने ड’रले सताउन सक्छ। ईर्ष्या गर्नेह’रूबाट जोगिएर काम लिनुपर्ने समय छ। दिउँसोदेखि नयाँ योजनातर्फ अग्रसर भइनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। साहसी काम गरेर नाम, दाम र प्रतिष्ठा हातपार्न सकिनेछ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते)- हतारमा निर्णय लिँदा काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। तापनि दिगो काम सुरु गर्ने समय छ। धेरै बोल्दा समस्या आउन सक्छ। दिउँसोदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ। सानो प्रयत्नले दिगो काम प्रारम्भ गर्न सकिने’छ। बोलीका भरमा काम बन्न सक्छ। आम्दानी’का नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। व्यवसायमा लाभ हुनेछ। उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ।
वृश्चिक(तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु)- सुरुमा खर्च बढ्नुका साथै अर्थअभावले सताउन सक्छ। फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। अरूको विश्वासमा पर्दा धो’का हुन सक्छ। टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्ना’ले यात्रा सम्भावना देखिन्छ। दिउँसोदेखि परिस्थिति अनुकूल बन्नाले महत्त्वाकांक्षी काम गर्न सफल भइनेछ। तारिफयोग्य कामले प्रशंसक बढ्नेछन्। ज्ञान, कला र व्यक्तित्व निखार्ने समय छ।’
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे)- आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। प्रयत्न गर्दा दिगो काम प्रारम्भ हुन सक्छ। स्रोत–साधन जुट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मध्याह्नपछि बसाइको स्थानान्तरण वा यात्रा हुने सम्भावना छ। खर्च लागे पनि प्रयत्न गर्दा काममा सकारात्मक संकेत प्राप्त हुनेछ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। मिहिने’तीहरूका लागि दिन फ’लदायी रहनेछ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि)- कीर्तिमानी कामको यश लिँदै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा नाम र दाम कमाउने समय छ। शुभचिन्तक’हरूको सहयोग जुट्नाले मनग्य फाइदा हुनेछ। कर्मयोगले आम्दानी समेत बढाउनेछ। मेहनत गर्दा आयआर्जनका नयाँ स्रोतसमेत फेला पर्नेछन्। पुरानो समस्या सुल्झानाले विविन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। मिहिनेत’ले नाम र दाम प्राप्त हुनेछ।
कुम्भ(गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द)- सामाजिक कामले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। आध्या’त्मिक चेतनाले धर्मकर्म र सेवामा प्रवृत्त गराउनेछ। सानो प्रयत्नले कीर्तिमानी कामको यश लिने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। शुभचिन्तकह’रूले साथ दिनेछन् भने भविष्यका लागि धनसञ्चय र कर्मनिश्चय गर्ने समय छ। प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् र जीवनशैली’मा परिवर्तन आउनेछ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि)- स्वास्थ्य कमजोर रहनाले काम पूरा गर्न समय लाग्नेछ। जिम्मेवारी बढे पनि न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउ’नुहोला। दिउँसोदेखि स्थिति’मा सुधार आउनेछ। चुनौतीहरू स्वतः हट्नेछन् भने अवसर तथा सफ’लताले पछ्याउनेछन्। मिहिनेत परे पनि भाग्यले सफलताको उचाइमा पुर्याउनेछ।
तपाईंको दिन सुभ रहोस्…
Prevनेपालमा कोरोनाबाट थप १ जनाको मृ’त्यु, मृत’क १० पुगे
Nextप्रेमी अर्कैसँग लागेको थाहा पाएपछि भारतिय नायिकाले गरिन् यस्तो…(हेर्नुहोस् भिडियो)
अघोरी बाबा’ले के भने त यस्तो ? पूजा शर्मा विमा’नमा नै रो’इन्
शिक्षक र विद्यार्थीको प्रेम,अहिले टिक`टक बनाएर भाइरल जोडी (भिडियो हेर्नु`स्)
गायिकाले बयान फेरिपनि के अब पल शाह जे’लबाट छुट्छन् त ? यसो भन्छन् वकील
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (111188)